Semalt, Natalia Khachaturyan बाट विशेषज्ञको साथ कुञ्जी शब्द घनत्व अनुकूलन गर्नुहोस्
कुञ्जी शब्दहरूले व्यवसाय मालिकहरूलाई धेरै अलमल्लमा पार्दछ किन कि किन तिनीहरू मध्ये केही SEO सुरू गर्ने बारे शंकास्पद हुन सक्छ। हाल, त्यहाँ त्यस्ता कम्पनीहरूको फ्लक्स छन् जसले सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछन् जसले Google परिणामहरूको शीर्षमा वेबसाइट प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यस्ता प्रश्नहरू जुन तिनीहरू मध्ये एक झूट छ र कुनचाहिँ छैन, वा एसईओमा लगानी गर्ने सही विकल्प छ कि छैन भन्ने कुरा उत्पन्न हुन बाध्य छ। यस सन्दर्भमा, Semalt को सामग्री रणनीतिकार, नतालिया खाचातुर्यन , हाइलाइट गरिएको समस्याको एक सरल समाधान प्रस्ताव गर्दछ:
प्रायः व्यक्ति एसईओमा कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोगलाई गलत अर्थ लगाउँदछन्
२०० In मा, म्याट कट्सले व्याख्या गर्‍यो कि Google ले अब खोज खोज एल्गोरिथ्मको अंशको रूपमा कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको थिएन। यस चेतावनीको बावजुद, व्यक्तिहरूले यस गलत धारणालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् कि किवर्डहरू उनीहरूको एसईओका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। तिनीहरू किवर्ड मेटा ट्याग प्रयोग गर्न जारी राख्छन् भन्ने तथ्यमा कि Google.com ले उनीहरूलाई बेवास्ता गर्दछ।
जब एसईओ अझै यो शिशु चरणमा थियो, खोज ईन्जिनले सामना गर्न खोज्ने समस्याहरू मध्ये कुञ्जी शव्दहरू भराई थियो। प्रारम्भमा, खोजी ईन्जिनहरूले केवल पृष्ठमा कारकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछन् अघिल्लो ब्याकलिंक्सको प्रयोग जस्ता अफ-पृष्ठ कारकहरू ह्यान्डल गर्न पर्याप्त परिष्कृत हुन। कुञ्जीशब्दहरू अन-पेज कारकहरू बीच हुन् जुन वेब विकासकर्ताहरूले वेबसाइटको ब्याकइन्डमा कुञ्जी शब्द मेटा ट्याग प्रयोग गरेर राख्दछन्।
रणनीति चाँडै 'कीवर्ड स्टफिंग' भनेर चिनिने एक गतिविधि द्वारा दुरुपयोग भयो। कीवर्ड स्टफिंग ब्ल्याक ह्याट रणनीतिहरूको रूपमा प्रयोग गरिएको धेरै एसइओ तरिकाहरू मध्ये एक हो। धेरै व्यक्तिहरूले कसरी जानकारीको दृश्यतालाई हेरफेर गर्न ट्यागमा धेरै कुञ्जीशब्दहरू (जसमध्ये केही अप्रासंगिक थिए) सामानहरू किन्न सकिन्छ भनेर हावा पाए। प्रयोगकर्ताहरूले यी कुञ्जी शब्दहरू देख्न सकेनन्, तर यसले गलत दिशा र गलत खोज परिणामहरूको डेलिभरी गर्न सहयोग पुर्‍यायो।
गुगलको प्रतिक्रियाले वेब अनुक्रमणिका क्रममा मेटा ट्यागलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्ने थियो र यसलाई स्पष्ट गर्न जारी राख्यो। जति मानिसहरूले यसलाई मिथकको रूपमा सोच्दछन्, यस तथ्यको सत्यता यो हो कि गुगलले अब आफ्नो वेब खोजीमा कुञ्जी शब्द मेटा ट्यागहरू प्रयोग गर्दैन।
यदि गुगलले मेटा ट्यागलाई बेवास्ता गर्दछ भने, यसको मतलब केवर्ड शरणार्थीले वेबसाइटलाई हानी गर्दैन?
लोकप्रिय धारणाको विपरित, किवर्ड स्टफिंगले वेबसाइटलाई हानी गर्दछ। कीवर्ड स्टफिंगले कुनै एसईओ मान प्रदान गर्दैन, यसले सबैमा रैंकिंग नहुने सम्भावनाहरू बढाउँदछ। गुगलले अन्य प्रकारका कीवर्ड भरीका लागि खोजी गर्ने तरीका फेला पार्‍यो।
कट्सले पुष्टि गरे कि २०१२ मा पेन्गुइन एल्गोरिथ्मको विमोचनले वास्तवमा गुगलका अवस्थित गुणवत्ता दिशानिर्देशहरूलाई उल्ल .्घन गर्ने सोचेका साइटहरूको श्रेणी कम गर्ने थियो। गुगलको दिशानिर्देश मध्ये एक लामो समयदेखि भइरहेको ठाउँको कुञ्जीशब्द भरिनुबाट बचाउनु हो। यसले भन्छ 'अप्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरूको साथ पृष्ठ लोड नगर्नुहोस्।'
यसले सुझाव दिन्छ कि गुगलले एसईओ उद्देश्यका लागि कुञ्जीशब्द ट्याग प्रयोग नगरे पनि, यो एल्गोरिदमले अझै पनि स्टफिंग र हेरफेरको मुद्दा खोजी गर्दछ।
अन्य कालो टोपी रणनीतिहरूले समावेश गर्दछ:
अदृश्य पाठ धेरै स्प्यामर सामग्री पृष्ठशब्दहरूमा पृष्ठभूमिसँग तिनीहरूको रंगहरू मिलाएर किवर्ड गर्दछ। यसको पछाडि विचार भनेको कुञ्जी शब्दहरूलाई मानव आँखाबाट लुकाउनु हो तर सर्च इञ्जिनहरूबाट होईन। यस मार्फत, स्पामकर्ताहरूले वेबसाइटको उपस्थिति परिवर्तन नगरीकन खोज रैंकिंगमा उनीहरूको प्रासंगिकता बढाउने आशा गर्दछन्।
लुकेका पाठ र लिंकहरू। छविहरूको पछाडि अन्य पाठ लुकाउनुहोस् वा क्यास्केडि Style्ग शैली पाना कुञ्जी शब्द स्टफिंगको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूले ट्यागहरू प्रयोग गर्दछ जसले तिनीहरूलाई सम्भव ब्राउजरमा लुकाउनको लागि सम्भव बनाउँदछ तर खोजी ईन्जिनहरूमा पठनीय राख्दछ
कुञ्जी शब्द मेटा ट्याग बाहिर कीवर्ड भराई। यदि तपाइँ वेबसाइटमा अन्य ट्यागहरूमा कुञ्जी शव्दहरू अधिक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि, यसले यसको र्यान्किंग सुधार गर्नुको सट्टा साइटमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ। मानव को लागी लेखन र खोज ईन्जिनको बीचमा सन्तुलन सँधै प्रहार गर्नुहोस् सुनिश्चित गर्नुहोला कि सम्पूर्ण सामग्री प्राकृतिक रूपमा पढिएको छ।
नक्कल ट्यागिंग। जब प्रयोगकर्ताले साइट भर शीर्षक र मेटा वर्णन प्रतिलिपि गर्दछ। गुगलले यसलाई दोहोर्याइएको सामग्रीको रूपमा अवलोकन गर्दैन यसैले यो प्रासंगिक छ कि मान्दै। यसको सट्टामा, यसलाई नक्कल गरिएको सामग्रीको रूपमा व्यवहार गर्दछ र यसरी यसलाई खोजी परिणामबाट फिल्टर गर्दछ।
हामी यहाँबाट कहाँ जान्छौं?
एसईओ को लागी एक ध्वनि दृष्टिकोण बहुआयामी हो। यद्यपि यो सबै सामग्रीमा भारी फोकस गर्न साथै प्रासंगिकतामा तल झर्दछ। व्यक्तिहरूले SEO मा पुग्न सक्ने तरिका परिवर्तन गर्नुपर्दछ र खोज शब्दहरूमा खोजशब्द प्रयोग गरेर बदल्नु पर्छ।